Grail Indic Forex chakarurama - Forex zviratidzi Download
musha MT4 zviratidzi Grail Indic Forex chakarurama
Grail Indic Forex chakarurama
Grail Indic Forex chakarurama yakazokudziridzwa uye vakabvuma kubudikidza grailforex.com nokuda scalpers. Rakanga rakagadzirirwa scalping. It unonyatsoshanda kana kushandiswa romusoro zvinotevera Currency maviri: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD, EUR / GBP, EUR / JPY uye USD / CAD.
Unogona kushandisa chinoratidza kunomumwe timeframes. Zvisinei nokuti scalper ari tighter timeframes nguva dzose zvakanakisisa. Unofanira kuvavarira kushandisa M5, M15 uye M30 timeframes.
Fig.1. The Grail Indic paakati yakatakura pamusoro wokutengesera chati.
Grail Indic chokukomborerwa ndiye anokonzera kuratidzwa pamusoro yeyero nyeredzi kuumbwa museve uye roruvara rwakatsvukuruka muitiro mutsetse. The yeyero Nyeredzi kuumbwa museve ndizvo zviratidzo apo vaaleanpunainen kuitika mutsetse inongova zvinosimbisa zvinoitwa pamusika mitengo. Pane zvimwe madenderedzwa dzvuku kuti vari yakajeka pamusoro chati. Izvi chete anomiririra kutanga paumbwe muitiro mitsetse. The tsvuku yeChina havana kukosha wokutengesera chiratidzo, Ivo chete kuratidza kana kuratidza apo zvinenge mitsetse akatanga kuumba.
Sezvinongoita zviri pachena kubva apa mufananidzo, kuti chinoratidza akadzikama chaizvo uye regai kuzadza chati wako yakawanda Zvinhu Zvisina Basa. It chete anoratidza zvakakodzera ruzivo kuti muzvinashawo kushandisa kana kutengesa.
saka, sei zvakananga vanofanira muzvinashawo kushandisa chokukomborerwa iyi kuchinjanisa?
Chimwe chinhu chechokwadi chakarurama ichi ndechokuti anonongedzera kuti anopa dzakarurama chaizvo. Naizvozvo muzvinashawo kuita chaizvo sezvo anonongedzera zvinoratidza.
Achiisa munhu ACHETER hurongwa: nokuti ACHETER anonongedzera, tsvuku dzakaita nyeredzi zvakaumbwa miseve vari yakaumbwa dzinodzvova pamusika mitengo. Saka kana museve rinowanika pazasi makenduru, ndiwo achirurama mutenge. Kunyange zvazvo chinoratidza pasina chiratidzo ruzha (zvikanganiso), nguva dzose netsika uye tsika dzakanaka kushandisa kwamira. Nokuti scalper zvinokurudzirwa kuisa Kumira kwako pane imwe nhamba 2:1(kuti ndiyo kure pakati utore Tingawaneiko kaviri kurasikirwa chemabhazi). Zvisinei nechokwadi kuti utore Tingawaneiko anonzwisisa uye nyore kuvapo. Zvikasadaro iwe achaguma kuita kurasikirwa kubva kumusika ichatanga kusiyira asati kurova kwako utore mubereko.
Fig.2. Achiisa munhu Buy kuti apo scalping ari USD / CHF mari peya Grail Indic chakarurama.
Achiisa munhu ikatengesa hurongwa: nokuti ikatengesa anonongedzera, tsvuku dzakaita nyeredzi zvakaumbwa miseve vari yakaumbwa pamusoro pamusika mitengo. Saka kana museve rinowanika kumusoro makenduru, unofanira pakarepo vanoisa ikatengesa. Kunyange zvazvo chinoratidza pasina chiratidzo zvikanganiso, nguva dzose kutarisirwa uye tsika dzakanaka kushandisa kwamira (mira kurasikirwa uye tora mubereko). Havashandisi achitevera ichimbomira kuti iyi. Nokuti scalper zvinokurudzirwa kuisa Kumira kwako pane imwe nhamba 2:1(kuti ndiyo kure pakati utore Tingawaneiko kaviri kurasikirwa chemabhazi). Zvisinei nechokwadi kuti utore Tingawaneiko anonzwisisa uye nyore kuvapo. Zvikasadaro iwe achapedzisira kubva kumusika ichatanga kufamba pamberi kurova kwako utore mubereko kurasikirwa.
Fig.3. Grail Indic chokukomborerwa palcing munhu ikatengesa hurongwa.
zvisinei, kana uri vakarinda chati zvose kuburikidza, ipapo unogona kuvhara hurongwa kana ane pakatarisana chiratidzo anopiwa.
Grail Indic Forex chokukomborerwa ari Metatrader 4 (MT4) paakati uye musimboti wacho Forex chinoratidza ndiko zvokuchinja vaunganidza nhoroondo date.
Grail Indic Forex chokukomborerwa inopa mukana kuona peculiarities siyana uye mapatani mu mutengo emuchina izvo usingaonekwi chinoabatsira.
How yokugadza Grail Indic Forex Indicator.mq4?
Copy Grail Indic Forex Indicator.mq4 yenyu Metatrader Directory / nyanzvi / zviratidzi /
Right watinya musi Grail Indic Forex Indicator.mq4
Chakarurama Grail Indic Forex Indicator.mq4 rinowanika Chart yako
How kubvisa Grail Indic Forex Indicator.mq4 kubva Metatrader yako 4 chati?
Previous nyayaSuper Ganda Romusoro Winner Forex chakarurama
inoteveraSecret Profit Booster Forex chakarurama